Hub qarsoodi ah oo Mareykanku u daabulo kooxaha argagixisada? Azerbaijan oo saldhigeedu yahay Silk Way Airlines ayaa beenisay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Hub qarsoodi ah oo Mareykanku u daabulo kooxaha argagixisada? Azerbaijan oo saldhigeedu yahay Silk Way Airlines ayaa beenisay
Airlines • Airport • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Diyaaradda Silk Way Airlines ee Azerbaijan waxay sameysay 350 duulimaad qarsoodi ah oo boqolaal tan oo hub ah uga soo qaaday Bulgaria una gaysay argagixisada ISIS ee Suuriya iyo waddammada kale ee Bariga Dhexe intii u dhaxeysay 2014 iyo 2017.
Shaacinta ayaa waxaa sameeyay wariye ka tirsan Mashruuca Ka Warbixinta Dembiyada iyo Musuqmaasuqa (OCCRP) asaga oo u gudbinaya dowladda Mareykanka codsi ku saabsan Sharciga Xorriyadda Macluumaadka (FOIA) sanadkii 2016.
Silk Way Airlines waa shirkad xamuul oo xamuul ah oo u gaar ah Azerbaijan oo leh xafiiskeeda madaxa iyo howlaha duulimaad ee Heydar Aliyev International Airport ee Baku, Azerbaijan. Waxay ka shaqeysaa adeegyada xamuulka isku xira Europe iyo Asia, United States iyo Africa, iyo sidoo kale adeegyo loo qabanayo dowladda iyo ururrada aan dowliga ahayn.
Sannadkii hore, Harut Sassounian wuxuu maqaal u qoray Asbarez News oo ka warbixisay in Silk Way Airlines ee Azerbaijan ay sameysay 350 duulimaad qarsoodi ah oo boqolaal tan oo hub ah looga soo qaaday Bulgaria loona geeyay argagixisada ISIS ee Syria iyo dalal kale oo Bariga Dhexe ah intii u dhaxeysay 2014 iyo 2017.
Shaacinta ayaa waxaa sameeyay wariye ka tirsan Mashruuca Ka Warbixinta Dembiyada iyo Musuqmaasuqa (OCCRP) asaga oo u gudbinaya dowladda Mareykanka codsi ku saabsan Sharciga Xorriyadda Macluumaadka (FOIA) sanadkii 2016. Waxaa xusid mudan in Silk Way, “oo ay leedahay shirkad leh taariikh hore Xiriirka qoyska Azerbaijan ee Aliyev, wuxuu qandaraasyo qaali ah ka qaatay militariga Mareykanka, ”sida ku cad dukumiintiyada FOIA.
Hadda waxaan helnay daah-fur cusub oo la yaab leh oo ah in Silk Way ay ka heshay $ 419.5 milyan oo deyn Bangiga Dhoofinta iyo Soo dejinta Mareykanka (EXIM) si ay uga iibsato saddex diyaaradood oo xamuul ah 747-8 Boeing si ay u sii wadato howlaheeda xun.
Shirkadda Diyaaradaha ee loo yaqaan 'Silk Way Airlines' ("Silk Way") waxay si xoogan u beenineysaa sheegashooyinka beenta ah ee dhawaanahan la soo saaray dhowr maqaal oo khadka tooska ah la isku dayayo in lagu sumcad bixiyo sumcadda lagu kalsoon yahay ee Silk Way. Wax aan qiimo lahayn, qodobadani waxay ka dhasheen olole abaabulan oo macluumaad qaldan oo ay qoreen qoraayo ku takhasusay juquraafi siyaasadeed oo loogu talagalay inay si toos ah ula shaqeeyaan xiriirka Armenia.
Ka soo horjeedda sheegashooyinka beenta ah ee maqaallada, Silk Way wuxuu si xushmad leh u raacay dhammaan borotokoollada iyo hababka hoos yimaada xeerarka duulimaadyada qaranka iyo kuwa caalamiga ah iyo qodobbada sharciga ee khuseeya gaadiidka badeecadaha, oo ay ku jiraan Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka (IATA) iyo Ururka Duulista ee Caalamiga ah ( ICAO) heerarka. Nidaam hawleed caadi ah, ka hor intaan la sameyn duullimaadyada su'aasha laga qabo, Silk Way had iyo jeer waa la heli jiray, iyada oo aan lahayn xasaanad diblomaasiyadeed, dhammaan rukhsadaha lagama maarmaanka ah iyo ka-dhaafitaannada looga baahan yahay in lagu qaado xamuul khatar ah.
Intaa waxaa dheer, waxa loogu yeero 'duulimaadyada qarsoodiga ah', ee lagu daabacay maqaallada la soo sheegay, marka laga soo tago tiradooda khiyaaliga ah, waxaa loogu shaqeynayay si buuxda u hoggaansamida dhammaan nidaamyada la aasaasay waxaana amar ku bixiyay Waaxda Difaaca Mareykanka (DoD), halka dhammaan wakiillada iyo wakiillada. waxaa loogu talagalay hay'adda ku xusan. Sidaa darteed, bayaannada su'aalaha laga weydiinayo nooca duulimaadyadan iyo wakiilladooda iyo wada-hawlgalayaashooda waxaa ka maqan dhammaan qodobbo sharci ama wax ku ool ah.
Taa bedelkeed, Silk Way sida saxda ah ee ay xamuulkan u sido waxaa xaqiijiyey mas'uuliyiin badan, kuwaas oo tan iyo markii ay si cad u beeniyeen sheegashooyinka beenta ah ee anshax-darrada ah ee bayaannada rasmiga ah, mid ka mid ah lagu soo bandhigay halkan.
Qorayaasha isku midka ah ee isku dayaya inay ku sifeeyaan Silk Way inay yihiin shirkad ku lug leh howlo sharci darro ah, waxay qirayaan qoraalladooda in hay'adaha sare sida militariga Mareykanka oo ay ku jiraan Taliska Gaadiidka Mareykanka, Boeing iyo Boeing Global Services, Waaxda Difaaca Qaranka ee Kanada, Ciidamada qalabka sida ee Jarmalka, Ciidanka Faransiiska iyo Qaramada Midoobay, waxay xiriir qandaraas dheer la leeyihiin Silk Way. Wadashaqeyntani waxay dib u xaqiijineysaa sumcadda wanaagsan ee diyaaraddeena waxayna caddeyn u tahay sida ay uga go'an tahay Silk Way adeegyo tayo leh, nabadgelyo, isku haleyn, iyo u hoggaansanaan shirkadeed.
Markii lagu guuldareystay in la caddeeyo sheegashadeeda duulimaadyada sharci darrada ah, ololihii xog-ogaalnimada ayaa markaa ku kacay weerar naxariis darro ah oo ka dhan ah Madaxweynaha Kooxda Silk Way, Mr. Zaur Akhundov wuxuuna su'aal ka keenay maalgelinta ballaarinta maraakiibta Silk Way. Maqaallada ayaa been abuur ka sameeyay aqoonsi iyo khibrad Mudane Akhundov, iyagoo isku dayaya inay u muujiyaan inuu yahay 'nin qarsoon' oo aan la garanayn oo la wareegay gacan ku haynta astaanta Silk Way. Xaqiiqdii, si kastaba ha ahaatee, Mudane Akhundov wuxuu muhiim u ahaa aasaaska Silk Way, wuxuu hogamiye ka ahaa kooxda Silk Way bilowgii, wuxuuna keenay tobanaan sano oo waayo-aragnimo qaali ah horumarinta warshadaha duulista ee Azerbaijan. Mudane Akhundov wax xiriir ah lama lahan dowlad ama xisbi siyaasadeed.
Marka laga hadlayo eedeymaha la xiriira maalgelinta ballaarinta duulimaadyada 'Silk Way', diyaaraddayadu waxay si iskaashi leh ula shaqeysay natiijada ka dhalatayna waxay dhistay iskaashi lagu kalsoon yahay oo lala yeesho hay'ado maaliyadeed oo caalami ah oo caan ah, oo ay ku jiraan gaar ahaan, Bangiga Dhoofinta-Soo-dejinta (Ex-Im) ee Mareykanka. Bangiga Ex-Im waa hay'ad federaal ah oo leh siyaasadaha aasaasiga ah ee lagu taageerayo helitaanka alaabada Mareykanka soo saaro sida diyaaradaha Boeing. Kahor intaan Silk Way si sharci ah ku helin amaahda sicirka suuqa ee jira oo ay taageereysay Ex-Im Bank, diyaarada waxay si guul leh u dhaaftay dhamaan talaabooyinka nidaamka u hogaansanaanta, oo ay kujirto dib u eegista taxadarka leh ee dowlada Mareykanka.
Intaas waxaa sii dheer, dammaanadda ay Silk Way ka heshay Bangiga Caalamiga ah ee Azerbaijan (IBAR), waxaa u baahday Bangiga Ex-Im oo ah amni dheeri ah waxaana la siiyay duulimaadkeenna iyadoo lagu saleynayo shuruudaha iyo xaaladaha suuqa caadiga ah, qiimeynta shirkadda, iyo iyada oo aan mudnaan kasta oo ay ku leedahay Silk Way. Marka lagu daro howlaha kala-soocidda adag ee shirkadda duulimaadka, Silk Way waxay ilaalisaa hab-maamuuska 'Ogow Macaamiilkaaga' waxayna si adag ugu hoggaansan tahay hababka ugu wanaagsan ee ganacsiga caalamiga ah, iyadoo si firfircoon u kala shaandheynaysa macmiil kasta oo mustaqbalka ka imaan kara wixii khatar ama dhaqdhaqaaq sharci darro ah. Taariikhda u hoggaansamida shirkadda 'Silk Way' kaliya ma yareynin halista, laakiin sidoo kale waxay abuurtay oo xoojisay xiriirrada ganacsi ee adduunka oo dhan. Macluumaad kasta oo lid ku ah, oo ay ku jiraan qadarka buuqsan ee amaahda 'Silk Way', gebi ahaanba waa been.
Kooxda lagu kalsoon yahay ee Silk Way, wada shaqeynta xoogan ee adduunka oo dhan iyo anshaxa, howlgalada nabdoon waxay si sharaf leh u sii wadi doonaan bixinta adeegyada ugu wanaagsan ee warshadaha xamuulka hawada ay siinayaan in ka badan 50 meelood oo adduunka oo dhan ah oo aan ka shaqeyno.
Muxuu ahaa olalaha sumcad xumada iyo maqaalka Silk Way Airlines waa tixraaca ku
Maqaalkani waxaa la daabacay Sebtember 4 wuxuuna sharxayaa:
"Silk Way waxaa la siiyay qandaraasyo ka badan $ 400 milyan oo lala yeelanayo Taliska Gaadiidka Waaxda Difaaca Mareykanka in ka badan toban sano," ayuu yiri Devansh Mehta oo ka tirsan OCCRP. Silk Way waxay u daabushay Afgaanistaan ​​“rasaas iyo waxyaabo kale oo aan halis ahayn” ilaa 2005. “Marka laga soo tago xiriirka ay la leedahay dowladda Mareykanka, Silk Way Airlines waxay sidoo kale la shaqeysay qandaraasle hoose ee Waaxda Difaaca Qaranka ee Kanada, ciidamada qalabka sida ee Jarmalka. , iyo ciidanka Faransiiska, ”Mehta ayaa shaaca ka qaaday.
Bishii Abriil 2017, Silk Way waxay ka kordhisay iibkeeda Boeing, iyadoo la saxiixatay heshiis $ 1 bilyan ah oo loogu talagalay 10 diyaaradood oo cusub oo 737 MAX ah, sida uu sheegay wariye Mehta. Si kastaba ha noqotee, lama oga sida loo maal galiyay iibsiga cusub. Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, Silk Way waxay ku dhawaaqday qorshe ay ku soo iibsaneyso laba diyaaradood oo kale oo xamuul ah 747-8.
Mehta wuxuu shaaca ka qaaday in “diyaaradda waxaa iska leh Silk Way Group, oo, ugu yaraan hal dhibic, xiriir dhow la leh qoyska reer Azerbaijan ee xukuma Aliyev (oo diyaaradahooda u adeegsada safarada qaaska ah) waxayna ka faa’iideysatay heshiisyo dowladeed oo roon. Macluumaadka laga helay FOIA waxay muujineysaa in shirkadda silk way Airlines ay qaaday tallaabooyin ay ku qarinayso aqoonsiga milkiilayaasheeda, laga yaabee inay sii wanaajiso fursadda ay ugu guuleysan karto dammaanadaha amaahda Mareykanka iyo qandaraasyada milateri.
Mehta wuxuu intaas ku daray “Azerbaijan waxay gashay kaalinta 122-aad oo ka mid ah 180 dal oo ku jira aragtida musuqmaasuqa ee Transparency International, halka qoyska Madaxweyne Ilham Aliyev ay leeyihiin hanti qaali ah oo adduunka oo dhan ka badan $ 140 milyan. Waraaqaha Panama iyo xogaha kale ee la helay waxay ku lug leeyihiin qoyskii ugu horreeyay ee waddanka inay ku lug leeyihiin ku dhowaad dhammaan qeybaha dhaqaalaha ee Azerbaijan, laga soo bilaabo hoteelada raaxada illaa macdanta illaa bangiyada. ”
Marka la eego shuruudaha Bankiga Dhoofinta iyo Soo dejinta ee $ 419.5 milyan oo deyn ah oo loo siiyay Silk Way, haddii ay dhacdo in la bixiyo, khasaaraha waxaa dib u bixin doona Bangiga caalamiga ah ee Azerbaijan (IBA). Dhibaatadu waxay tahay in IBA "lagu soo oogay Azerbaijani Laundromat, oo ah mashruuc ballaaran oo ku dhowaad 3 bilyan oo doolar dalka looga saaray iyada oo loo marayo shirkado kala duwan oo qolof ah," ayuu Mehta qoray. Intaa waxaa sii dheer, IBA ma ahan meel ay ku damaanad qaadi karto amaahda Silk Way, maaddaama IBA lafteeda ay ku dhawaaqday musalafnimo sanadkii 2015, oo aysan awoodin inay bixiso deynta $ 3.3 bilyan ah!
Nate Schenkkan, agaasimaha mashruuca ee warbixinta Qaramada Midoobay ee Transit ee Freedom House, oo ah hay'ad samafal oo fadhigeedu yahay Maraykanka oo kormeerta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha adduunka oo dhan, ayaa su'aal gelisay caqliga amaahda EXIM Bank ee Silk Way: "Azerbaijan, halkaas oo hal qoys uu dhaqaale ahaan ugu badan yahay siyaasad ahaanna markaa u adeegsaneyso hay'adaha dowliga ah inay taageeraan mashaariicdeeda dhaqaale, waxaa jira iska horimaad danaha oo iska cad. ”
Arzu Aliyeva, Pres. Gabadha Aliyev oo 21 sano jir ah sanadkii 2010, waxay ka mid ahayd seddexdii milkiile ee Silk Way Bank, qeybta dhaqaalaha ee Silk Way Holding. Tan iyo 2017, magaceeda mar dambe looma sheegin milkiile ahaan. "Silk Way Holding, oo sidoo kale loogu yeero Silk Way Group (SW Group) boggeeda internetka, waa shirkad isku xirtay oo hadda liiska ku qortay 11 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda diyaaradaha," sida ay sheegtay Mehta.
Shirkadda Silk Way Holding ayaa xukuntay waaxda duulimaadyada ee Azerbaijan kadib markii shirkadda duulimaadka ee AZAL duulimaadyadeeda si sir ah oo qarsoodi ah loo wareejiyay iyada oo aan wax dalab iyo qandaraasyo ah la soo bandhigin. Mehta wuxuu qoray "shirkad gaar loo leeyahay oo gaar loo leeyahay oo ka tirsan waaxda isgaarsiinta ayaa ku dambaysay in qoyska [Aliyev] ay helaan ilaa $ 1 bilyan oo laaluush ah oo kaash ah iyo saamiga saamiga, sida ku xusan sheeko hore oo OCCRP ah. Baadhitaanka ayaa sidoo kale lagu ogaaday in lacagtaas la siiyay qoyskii ugu horreeyay iyada oo loo sii marayo shirkado kala duwan oo qarsoodi ah oo badda ka shaqeeya. Shirkadahani waxay u suurta galiyeen Aliyev inay xakameeyaan saamiyada macdanta dahabka, isgaarsiinta iyo ganacsiyada dhismaha ee Azerbaijan. ”
Sida ku xusan diiwaangelinta 2006, Silk Way Airlines waxaa iska lahaa IHC (International Handling Company), oo ah hay'ad dibadeed oo fadhigeedu yahay British Virgin Islands. Diiwaan gelinta 2017, Silk Way Airlines waxay sheegtay in 40% shirkadda ay leedahay IHC, halka 60% ay leedahay SW Holding, "si wax ku ool ah u maamusha" Zaur Akhundov, oo ah muwaadin u dhashay Azerbaijan. Mehta wuxuu yiri "IHC waxay kuxirantahay qoyska Aliyev iyada oo loo marayo agaasimaheeda Jaouad Dbila oo sida la sheegay wakiil u ahaa danaha ganacsi ee qoyskii ugu horeeyay waagii hore."
Sannadkii 2011, maamule asal ahaan kasoo jeeda Ruushka, Grigory Yurkov, ayaa la siiyay awood qareennimo ee labada Silk Way Holding iyo IHC, sida ku cad joornaalka rasmiga ah ee Luxembourg. Balantan waxaa loo adeegsaday hab lagu qariyo milkiilayaasha runta ah ee IHC.
Dhanka kale, Zaur Akhundov wuxuu si qarsoodi ah u noqday milkiilaha 100% ee kooxda Silk Way Group oo dhan 2014. Waqtigaas, shirkadda iyo hantideeda badan waxay horey ugu qiimeeyeen balaayiin doolar, Mehta ayaa ku dhawaaqay, iyadoo lagu saleynayo dalabka damaanadda amaahda shirkadda. Akhundov, oo 50 jir ah, wuxuu xilal badan oo rasmi ah ka soo qabtay Azerbaijan. Ma cadda sida Akhundov uu ku noqday milkiilaha shirkad balaayiin doolar ah oo leh in ka badan 10 diyaaradood, shirkad caymis, shirkad dhisme, iyo shirkad dayactirka diyaaradaha, si loogu magacaabo qaar ka mid ah shirkadaha Silk Way Group, ”Mehta yaabay.
Sida laga soo xigtay Schenkkan oo ka tirsan Freedom House, “Azerbaijan waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay mid dhexe, Ahraam toosan halkaasoo waxtarrada ay u leedahay hal qoys oo kireysta kirooyinka guud ahaan dhaqaalaha. Tan waxaa ku jira nooc kasta oo macaamil ganacsi ah, ma aha oo keliya macaamil rasmi ah oo dowladeed oo laga yaabo inay ku lug yeeshaan canshuuraha iyo lacagaha dadweynaha, laakiin sidoo kale waxyaabaha ku lug leh waxa aan caadi ahaan tixgelinno ganacsiga gaarka loo leeyahay: soo dejinta, dhoofinta, badeecadaha macaamiisha, gaadiidka - meel kasta oo ka mid ah dhaqaalaha, qoyska saami buu ku leeyahay oo wuxuu helayaa goyn wixii dhaca.
Golaha Koongareeska Mareykanka waa inuu qabtaa dhageysi si loo baaro ku haboonaanshaha damaanada amaahda $ 419.5 milyan ee EXIM Bank ee shirkadda Silk Way Airlines, raridda hubka ee kooxaha argagixisada ee Bariga Dhexe, iyo lahaanshaha qarsoon ee qoyska Aliyev ee xukuma. Si kastaba ha noqotee, maxaa Azerbaijan, oo ah dal leh balaayiin petrodollar, la siiyaa amaah Mareykan ah?